waxyeelada qaadka iyo muxaadiradii (abaa qatay) | welcome Liban Mukhtar Ramadan's Web-Page Contact Emails: Rabadaan2@gmail.com or Rabadaan1@hotmail.com
waxyeelada qaadka iyo muxaadiradii (abaa qatay)
Sh. Mustafe Xaaji Ismaciil ayaa taariikhdu markii ay ahayd 24 tii bishii luuliyo 2006 wuxuu ka jeedinayey magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska muxaadaro uu ku fara yaraystay oo si cilmiyan ah uga waramaysay wax-yaaldada qaadka. Halka muxaadaradu ka socotay oo ahaa masaajidka Al-hudaa… waxaa buuxay rag Soomaaliyeed oo aad u badan, kuwaas oo markii aan isha mariyey in inta badan ay ahaayeen rag wawayn oo badidoodu in kastaba ha le’ekaatee waayo aragnimo qaadka u lahaa, intii muxaadaradu socotay waxaan dusha kala socday dareenkii dadka meesha fadhiyey. Dareenkaas ayaa ahaa mid kala duwan oo soo jiidasho lahaa, waxaa mararka qaarkood kor u kayey qosol aad arkayso inuu u markhaati furayo Sheekha, marmarka qaarkoodna waxaa jiray baaqyo dhexmarayey rag malaa iyagu is garanaya oo mdasha fadhiyey, ilka cadayn, madaxruxid, eegmo, yaxyax iyo yaab intaba way laheen dareenkii ishaydu qabanay, kaas oo dadkii meesha fadhiyey ay si aamusan isku dhaafsanayeen ama isugu markhaati furayeen.
Qaadku wuxuu dowr muhiim ah ka qaataan kala furfurashada mujtamaca iyo faqriga, sida qoyska oo waxyeelada ugu horraysaa ay soo gaadho, wuxuu abuuraa khilaaf iyo is maandhaaf aan loo baahnayn, wuxuu wax yeelo u gaystaa da’yarta oo welefta deetana qayb ka qaata dhaca, boobka iyo dilka intaba
ubax fahmi iyo heestii galbiska →